Global Voices teny Malagasy » Ataon’i Okraina Lasa “Blood Bucket Challenge” ny Ice Bucket Challenge · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 29 Septambra 2014 15:34 GMT 1	 · Mpanoratra Tetyana Lokot Nandika Raveloaritiana Mamisoa
Sokajy: Eoropa Afovoany & Atsinanana, Okraina, Rosia, Ady & Fifandirana, Fahalalahàna miteny, Fanoherana, Hafanàm-po nomerika, Mediam-bahoaka, Politika, Zon'olombelona, Akon'ny RuNet
Mety hampalaza ny tolon'ny Okrainiana ve ity lahatsary momba ny Blood Bucket Challenge ity? Pikantsary tao amin'ny YouTube.com.
Nahataitra an'i Silicon Valley, Etazonia ary izao tontolo izao ny #IceBucketChallenge tamin'ny fiandohan'ity taona ity, ny #IceBucketChallenge dia manentana momba ny aretin-kozatra manimba antsoina hoe amyotrophic lateral sclerosis  (ALS) sy mandrisika hanaovana fanomezana fikarohana. Maro ireo fiantraikan'ny  fanamby natao hanaovna tolona hafa nanomboka teo, ka maro ireo singa niafara tao anaty siny: vary, antontam-bato amam-biriky avy amin'ny trano rava, bala, eny fa na hatramin'ny ovy  aza.
Andro vitsy lasa izay, nikarakara  fampisehoana manohitra-ady (anti-war) tao amin'ny Kyiv-Pechersk Lavra, monasiteran'ny Kristianina Ortôdôksa tranainy ao an-drenivohitr'i Okraina ireo mpikatroka mavitrika avy ao amin'ny hetsika FEMEN Okrainiana. Amin'ny fomba mampiavaka ny FEMEN, vehivavy roa mpikatroka tsy manao tati-nono miaraka amin'ny “Atsaharo ny Adin'i Putin” misoratra eo amin'ny vatan'izy ireo no miatrika fakàntsary, ary nararaka teo amin'ny lohan'izy ireo ny siny feno rano miloko mena . Misy soratra hoe “Ràn'i Okraina” ilay siny,” nanao fampisehoana ny FEMEN ary nivoaka tamin'ny vaovaon'ny alina. Niely tao amin'ny media sosialy ihany koa ny lahatsary, saingy tsy niteraka tabataba, satria toa zary zatra ireo hetsika ataon'ny ankamaroan'ny mpikatroka miboridana ny Okraniana.
Mpikatroka FEMEN manohitra ny ady ao Okraina. Pikantsary avy amin'ny tsn.ua.
Tsy maintsy nipaka any amin'ireo mpiserasera sasany ny aingan'ny Haika “Blood Bucket” (Sinin-drà) ho fisarihana ny mason'izao tontolo izao, satria andro vitsy lasa izay, nandefa lahatsary ahitana vondron’ olona mifandraraka siny misy rano miloko mena ny andiam-pianatra avy ao Vilnius, ao Litoania, tapatapahan'ireo hafatra fohy mampitodika amin'ny sandan'ny ady ao Okraina. Ahitana olona maherin'ny 20 ny lahatsary izay nalaina tao anaty orinasa iray ao Vilnius efa tsy miodina intsony . Miteny ho azy ny filazalazana ao amin'ny lahatsary:
Nanatontosa horonantsari-mihetsika fohy “The Blood Challenge (haikan'ny rà)” izahay, miantso an'i Eoropa mba tsy hanao vain-drahalahy tsy maharary manoloana ny ady ao Okraina. Ahitana olona avy ao Portiogaly, Frantsa, Okraina, Romania, sns amin'ireo olona ireo
Ahitana fifanompana eo amin'ireo mpisera mpomba ny Rosiana sy ny mpomba ny Okrainiana amin'ny fiampangana izay tompon'andraikitra amin'ny ra mandriaka (fanomezan-tsiny an'i Poutine, Obama ary ny maro hafa eo anelanelany eo) ireo fanehoan-kevitra ao amin'ny lahatsary Youtube. Araka ny fanamarihan’ ilay mpisera FdGod32, samy maka ny fandraisany azy amin'ny avoakan'ny lahatsary ny rehetra:
Mihevitra ny Rosiana fa fanoherana an'i Okraina ity. Mihevitra ny Okraniana fa hamelezana ny Rosiana ity. Inona no tena dikan'ity marina?
Tsy zava-baovao ny voambolana haika “blood bucket”, ampiasain'ireo mpamokatra ny lahatsary, fa efa nampiasain'ireo mpikatroka tao Etazonia taloha hisarihana ny saina  noho ireo tifitra anjambany mahazo ny tanora Mainty hoditra, sy nampiasain'ilay mpianatry ny Oniversiten'i Ohio hitsikerana  ny fihetsik'i Israely ao Gaza. Natsangana ihany koa ny diezy Twitter #bloodbucketchallenge  amin'ny lahatsary manohana an'i Okraina ary somary nahazo laza eo ho eo ihany hatreto, izay mpisera Twitter am-polony nizara ny lahatsary sy ny hafatra miaraka aminy.
https://t.co/rBW8S8bKjg  #Lithuania . Fantatr'izy ireo fa mety ho ry zareo indray no manaraka. Aciu! #BloodBucketChallenge  #Ukraine  #Russia  pic.twitter.com/evCk4cTlED 
Nahazo mpijery maherin'ny enina alina ilay lahatsary tao amin'ny YouTube, saingy mbola lavitry ny isan'ireo mpijery an-tapitrisany azon'ny lahatsary Ice Bucket Challenge voalohany indrindra (orizinaly). Toa hita fa tsy nahavita nampita ny hafatra amin'ny alalan'ny siny feno rà tsy tena izy miantso ireo mpanohana antseraseran'i Okraina ny andianà-fihantsiana tany am-boalohany nataon'ny FEMEN. Mandritra izany fotoana izany ireo Okrainiana tahaka ny efa leon'ny mahita rà tena izy, fa tsy taitaitry ny ra sarintsariny, avy amin'ireo namoy ny ainy tamin'ny ady.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2014/09/29/64267/
 Maro ireo fiantraikan'ny: https://globalvoicesonline.org/2014/09/03/people-around-the-world-are-creating-their-own-ice-bucket-challenges-for-different-causes/
 lahatsary ahitana vondron’: https://www.youtube.com/watch?v=U8gN8kJXI5Q&feature=youtu.be
 nalaina tao anaty orinasa iray ao Vilnius efa tsy miodina intsony: https://www.facebook.com/events/1496428127271995/
 hisarihana ny saina: https://www.youtube.com/watch?v=nIyAcjKnbWY&feature=youtu.be